बालबालिका सुतेको कोठामा सेक्स गर्दा हुन्छ यस्तो जोखिम ! « हाम्रो ईकोनोमी
डा. दिनेश बाँस्तोला पश्चिमा समाजमा प्रायः बालबालिकालाई सँगै सुताउने प्रचलन छैन ।
नाबालकै उमेरमा पनि उनीहरुलाई अलग्गै सुताउने प्रचलन देखिन्छ ।
तर नेपाल, भारतलगायतका पूर्वीय समाजमा भने बाल–बालिकाको निश्चित उमेर नपुगेसम्म बाबु–आमासँगै सुताउने प्रचलन छ ।
बालबालिका सानै छ भनेर सँगै सुताएर निदाएको समयमा आमा–बाबु यौन सम्बन्ध राख्न सक्छन् ।
सानै छ के थाहा पाउँछ र भन्ने लाग्न सक्छ । तर यो भ्रम हो । सँगै सुतेको बच्चा निदाएको छ भने पनि उसले बुबा–आमाको गतिविधि थाहा पाउने सम्भावना बढी हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा बालबालिकासँगै सुतेको अवस्थामा निदाए पनि यौनसम्बन्धी गतिविधि गर्दा उसको अचेतन मस्तिष्कले त्यो भण्डारण गरेर राखेको हुन्छ ।
भविष्यमा जब महिला र पुरुषबीचको निकटता र सम्बन्धबारे जानकार हुन्छन् त्यो अवस्थामा बालबालिका हुँदै अभिभावकले गरेको गतिविधिको प्रभाव देखिन सक्छ ।
बाल स्वभाव जे नगर भन्यो त्यही गर्न खोज्ने हुन्छ । यौन गतिविधिझँ देखिने उनीहरुको व्यवहार सुधार्न प्रयास गरे पनि आफूले गरिरहेको गतिविधि के हो भन्ने जानकारी नहुँदा बालबालिकाले त्यस्ता गतिविधि दोहो¥याइरहन्छन् । जसले अभिभावकलाई नै समस्या आउँछ ।
‘फिमेलहरु भियाग्रा’मा किन मच्चिरहेको छ बबाल ?
अमेरिकामा सार्वजनिक स्वास्थ्य र खाद्य मामलामा निगरानी राख्ने संस्था फुड एण्ड